Mila antsika rehetra ny fampandrosoana ny Firenena
vendredi, 06 juillet 2018 09:30
Efa maro ireo tetikasa naroso sy nodinihantsika rehetra niaraka teto nandritra ny taona maro izay.
Tonga ny fotoana andraisantsika andraikitra hiaraka anatanteraka izany tetikasa ho fampandrosoana ny Firenena sy ny Vahoaka Malagasy rehetra izany.
Manainga antsika rehetra, na inona fahaizany, na inona fiaviany, na inona finoany, na inona fironana politika ananany, lahy na vavy, tanora na lehibe, na an'asa na tsy manana asa, na mpianatra, na eto an-toerana na mipetraka any ivelany, hifanome tanana, traik'efa, fanohanana ara-pitaovana sy ara-bola, ahafahatsika miatrika ny fifidianana ho Filoham-pirenena ho avy io, satria tokoa ilaina ny fahafahana manova ny zava-misy sy mametraka ireo fomba fijery ananantsika ireo.
Hisy Ekipa nasionaly ajorotsika, hisy ihany koa komity mpanohana isam-paritra, isaky ny Kaominina, eny isam-pokontany, ka dia miantso antsika rehetra izay vonona hiroso amin'izany ahafahatsika mametraka ny lamina rehetra.
Aza menatra na matahotra hijoro ampandresentsika ny foto-kevitra hijoroantsika, tsy resaka antoko politika, fa ambony lavitra noho izany ny Fampandrosoana tiantsika ahorina maharitra eto amin'ny Firenentsika.